Otu esi melite LG G2 na gam akporo 7.1.1. (Nlereanya D802) | Gam akporosis
Ọ bụrụ na ụbọchị ole na ole gara aga, m kụziiri gị melite Samsung Galaxy S3 na gam akporo 7.1.1Ugbu a ọ bụ ntụgharị nke ụdị LG G2 mba na-enweghị ọkụ ma ọ bụ ihe atụ D802, nke ọtụtụ bụ ihe kacha mma gam akporo ama LG kere. Ya mere, taa, m ga-akụziri gị melite LG G2 D802 na gam akporo 7.1.1 emezughị site na LinageOS 14.1, ma ọ bụ gịnị ga-aga n'ihu nke Cyanogenmod 14.1.
Onye kwuru na ndị Rom esiri esiwọrịrị anwụ? Kedu ihe ọzọ, onye ga-anwa anwa chee na LG G2 bụ njedebe site n'oge gara aga mgbe, ka m gosiri gị na vidiyo agbakwunyere nke anyị ji malite ọkwa a, anyị na-ahụ LG LG G2 nke ọma nke na-eme ka ụdị gam akporo kacha ọhụrụ na nke kachasị ọhụrụ maka LinageOS?.
Na vidiyo m hapụrụ gị n'elu usoro ndị a, na mgbakwunye na igosi gị otu ọma gam akporo 7.1.1 si akpali LG G2 mba ma ọ bụ ihe atụ D802, m na-egosikwa gị usoro nke na-egbu maramara faịlụ ndị dị mkpa anyị na-aga na-eduga melite LG G2 na gam akporo 7.1.1 .
N'okpuru ebe m na-akọwa ihe niile ịchọrọ ịma iji nwee ike imelite LG G2 gị na gam akporo 7.1.1, site na esi gbanye ya ma wụnye TWRP gbanwere ma ọ bụ mgbake, na nbudata na na-egbu maramara faịlụ niile dị mkpa ka LG G2 anyị wee rụọ ọrụ otu ụbọchị mbụ anyị hapụrụ ya, ya na nnukwu ihe dị iche na anyị ga-emelitere ya na nke kacha ọhụrụ na nke kacha ọhụrụ nke gam akporo.
1 Ihe ndị dị mkpa iji melite LG G2 D802 na gam akporo 7.1.1
2 Faịlụ chọrọ iji melite LG G2 D802 na gam akporo 7.1.1
3 Otu esi emelite LG G2 D802 na gam akporo 7.1.1. Usoro na-egbu maramara usoro.
3.1 Usoro ọkụ
Ihe ndị dị mkpa iji melite LG G2 D802 na gam akporo 7.1.1
Nwee ọnụ, LG G2 nlereanya D802, Mgbọrọgwụ na gbanwetụrụ TWRP Iweghachite emelitere ka ya kacha ọhụrụ mbipute dị
Nwee ndabere EFS nchekwa adịghị ama ama.
Nwee nandroid ndabere nke usoro ihe niile ọ bụrụ na anyị alaghachi ịhapụ ihe niile dịka ọ dị tupu usoro ọkụ ọkụ nke Rom.
Nwee nkwado nke ngwa na data anyị niile ebe ọ bụ na n'ime nchapu ọkụ anyị ga-ehichapụ ha niile, n'agbanyeghị Mụ onwe m kwadoro ịwụnye dị ọcha site na mbido.
Nwere USB debugging nyeere site na ntọala ndị nrụpụta.
Faịlụ chọrọ iji melite LG G2 D802 na gam akporo 7.1.1
TWRP na ụdị ya bụ 3.0.2.1 budata ebe a.
Budata Rom usoro 14.1-20170101-UNOFFICIAL-d802.zip site na njikọ a
Budata Gapps gam akporo 7.1, nano ma ọ bụ micro. Lee nsụgharị niile cheta ịhọrọ ogwe aka + gam akporo 7.1.
Ozugbo ebudatara faịlụ atọ dị mkpa, Anyị na-edepụta na-enweghị nkụda mmụọ na ebe nchekwa nke LG G2 ma ọ bụ na Pendrive maka ntinye ya na mpụga site na OTG na anyị na-eso ndị a iji leta:
Otu esi emelite LG G2 D802 na gam akporo 7.1.1. Usoro na-egbu maramara usoro.
Ekwadoro m na ewezuga ịgụ usoro ndị ị ga-agbaso melite LG G2 D802 na gam akporo 7.1.1A na-atụ aro ka ị lelee vidiyo nke m hapụrụ gị n'aka nri na mmalite nke nkuzi a bara uru, ọ bụkwa na n'ime ya ka m na-egosi gị ihe niile site na nzọụkwụ na n'oge.
Anyị na-abanye Recovery mode na anyị na-emelite TWRP Iweghachite na ụdị ya kachasị ọhụrụ naanị pịa na Wụnye nhọrọ na họrọ zip ebudatara na mbụ.
Ka anyị gaa na nhọrọ reboot ma anyị họrọ Iweghachite Iweghachi.
Anyị na-aga nhọrọ Hichapụ o Ghichaa wee pịa nhicha dị elu y Anyị na-ahọrọ nhọrọ niile ma e wezụga ụzọ ebe anyị nwere faịlụ maka ịgba ọkụ Rom na Gapps.
Anyị na-aga nhọrọ wụnye o Wụnye y Anyị na-ebu ụzọ họrọ zip nke Rom wee họrọ zip nke Gapps ma ọ bụ ngwa Google, dị na usoro ahụ, na-ebu ụzọ họrọ zip Lin RomOS na mgbe ahụ Gapps Zip.
Anyị na-eme ka ụlọ mmanya ahụ rụọ ọrụ ahụ achọrọ nke a kariri ikpuchi na ntinye nke faịlụ abuo.
Mgbe usoro a mechara anyị họrọ nhọrọ nke Hichapụ Cache & Dalvik o nhicha Cache na Dalvik, anyị na-akpali ndị eji mmanya ọzọ na mgbe okokụre anyị họrọ nhọrọ nke Reboot System.
Site na nke a ị ga-enwerịrị ohere nwee ọ Gụ LG G2 gị D802 nke kachasị ọhụrụ na nke kachasị ọhụrụ nke gam akporo.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » ROM » Otu esi melite LG G2 na gam akporo 7.1.1. (Nlereanya D802)
Daalụ Francisco. Ana m agbadata ya ka ọ rue mgbe ọ ga-anwale. Echiche kacha mma
Daalụ maka nkuzi ahụ. You maara ma ọ bụrụ na ịgbanye mkpọrọgwụ site na eze nwere ike ịbụ nsogbu?
Ndewo, nke mbụ, Daalụ maka ịhapụ anyị inweta ihe maka lg g2 d802 anyị hapụrụ ahapụ ... ajụjụ, enwere m android 5.0.1 sel dị mma, achọrọ m ịwụnye 7.1.1 mana enwere m nsogbu, anaghị m nwere efs folda ... Achọrọ m ya na onye nyocha mgbọrọgwụ, ihe nchọgharị mgbọrọgwụ, ọ pụtaghị…. Abụ m mgbọrọgwụ. Ana m echere azịza, si Argentina! Daalụ nke ukwuu !!
Na mbụ na S3 mgbe m mere ọtụtụ ihe na ekwentị, emere m ya na-enweghị eme nkwado ndabere nke folda efs…. na ihe niile na-arụ ọrụ nke iri !!
Enwere m ike ịme ya na lg m n’enweghị nkwado folda ahụ?
Ndewo, kedu ka ị mere? Achọrọ m ịgwa gị na enweworị m ike ịwụnye ya ma ọ na-arụ ọrụ ebube na lg g2 d802…. Achọrọ m ịjụ ajụjụ, olee ebe m ga-esi nweta ngwa ngwa dịpụrụ adịpụ nke m nwere site na ụlọ ọrụ mmepụta ihe, nke bụ nke na-arụ ọrụ ebube mgbe niile ???. Echere m azịza, daalụ nke ukwuu !!
Ndewo ọma! na-eso usoro niile usoro ahụ amaliteghị. Mgbe ọ hapụsịrị akara ngosi LG windo ojii pụtara ma emeghị ihe ọ bụla. Ihe ngwọta bụ ibudata CAF BootStack na https://forum.xda-developers.com/lg-g2/development/boot-g2-hybrid-bootstacks-t3183219 Mee nhichapụ, wụnye bootstack, wee wụnye ROM na GApps dịka ị kwuru na ntuziaka ahụ. N'ụzọ ahụ, ọ rụụrụ m ọrụ na-enweghị nsogbu. Echiche kacha mma!
Otu ihe ahụ na-eme m, mana enweghị m ike ịbanye na mgbake, dịka i mere
Zaghachi Jose Manuel Martinez Salvador
Ndewo, Achọrọ m ịnweta ngwa ngwa Ntuziaka Q na-esite na ụlọ ọrụ na-akachasị mma, Ebee ka m nwere ike ibudata ya ?, EBUPUTA ???. ANA M AZA, EKELE !!
Ọ dị m nwute na azaghị m gị mbụ, mana ọ bụ mgbe ahụ ka m hụrụ ya
nwalee iji ZAZA REMOTE.APK
Aja cordovi dijo
Ndewo, achọrọ m enyemaka. Nsogbu bụ na m nwara nwụnye na lg g2 d802 m, ozugbo ịmalitegharị, lg logo pụtara ma ewepụ ya, a hapụrụ ihe niile ebe ahụ. Ekwentị mkpanaka ahụ anaghị amalite, ọ dị ka a ga - asị na enweghị m ike ibuli sistemụ arụmọrụ, biko chere maka azịza ozugbo enwere ike, aga m enwe ekele zuru oke
Zaghachi Sandy cordovi
Otu ihe ahụ mere m dịka Sandy Cordovi.
Echefuola m penultimate nzọụkwụ nke "Hichapụ Cache & Dalvik ma ọ bụ Cache nhicha na Dalvik" na ekwentị anaghị amalite ma ọ bụ gosi ihe ịrịba ama nke ndụ.
Kedu ihe m nwere ike ime?
Ndewo Francisco, ajụjụ (ma ọ bụrụ na ị ka na-agagharị n’isiokwu a site n’oge ruo n’oge).
Emere m mgbọrọgwụ nke LG2 m na-agbaso ndụmọdụ gị dị mma (naanị na m wụnye nwelite ikpeazụ nke Lineage nyere n'August), ọ dị ezigbo mma ma ana m ekele gị.
Ajuju m bu: o na enye m mmelite ohuru (emerem nbudata), kedu kam ga esi aga maka nwelite ya dika m mere oge mbu?
Zaghachi Juan Luis
Kedu oge atụmatụ nke mbido mbụ mgbe echichi?
Zaghachi Jose Atay
Emere m usoro niile, mana dị ka ọtụtụ n'ime ndị ahụ ezitere, ọ naghị amalite. Olee otú m ga-esi nwetaghachi ekwentị?
Ihe nyocha nke gam akporo ga - enyere gị aka ịchekwa batrị
Google malitere nnwale Ngwa ngwa